QIT600F2 Qorista kiniinka isdhexgalka
Qolo is-dhexgal ah oo Qomo ah
QIT600 F2 waa kormeeraha is dhex galka ee shaashada ballaaran ee ugu dambeeyay ee QOMO.Isticmaal miiskan is-dhexgalka cusub ee la cusboonaysiiyay si aad u maamusho muxaadaradaada ama soo jeedintaada adoon dhabarkaaga u jeedin dhagaystayaashaada.Kombuyuutarkaaga, waa kiniin awood leh oo leh muuqaal weyn, dhalaalaya, oo si cajiib ah uga jawaabaya.
Fiiro gaar ah: Waxaan taageernaa sumadda Qomo ee demo halka wax soo saarka ballaaran uu aqbali karo OEM/ODM
Awood dheeraad ah oo ku jirta qalinkaaga
Ku samee sharraxaad wax kasta oo leh qoraal-gacmeed aad u degdeg badan oo siman.Qaado qoraalo, sawir, oo samee sida aad ugu jirto buugga xusuus-qorka ee aad jeceshahay.
Waxaad ku qori kartaa qalinka leh noocyo kala duwan oo xariiqyo ah oo guji qalinka si aad u noqoto masax si aad u tirtirto fikradda khaldan.
Bandhigyada qalinka hal-abuurka ah ee Qomo ayaa kaa caawin doona inaad ku raaxaysato khibrada aad si toos ah ugala shaqaynayso shaashadda qalinkeena xasaasiga ah.
Naqshadeeyay si fudud oo raaxo leh
Ku hagaaji QIT600 F2 meel kasta oo u dhaxaysa 12° iyo 130°—wax kasta oo aad dareento.Umana baahnid inaad ka walwasho faragelinta markaad gacmahaaga ku nasato shaashadda markaad wax qorayso ama sawirayso.
Ku xidhnow dhagaystayaashaada
Ku xidh kombuyuutar adiga oo isticmaalaya gelinta HDMI, oo ku soo saar mashruuc ama shaashad weyn.Waxaad ka maamuli kartaa wax kasta oo ay daawadayaashaadu ku arkaan hal qalab, adigoon gadaashaada eegayn ama aanad ku dhuuman gadaasha shaashadda kombayutarka.
21.5 inch oo buuxa oo dahaaran (Xajmiga shaashadda wax ku ool ah: 478.64(H) X 270.11(V)) IPS Pen Display:
Iyada oo la adeegsanayo tignoolajiyada ugu dambeysay ee si buuxda u dahaaran oo ay ku qalabaysan tahay muraayad ka hortagta dhaldhalaalka, si wax ku ool ah u yareyso dareenka wareerka iyo ku dhawaad ​​​​aan kabaxsaneyn, ilaali indhahaaga marka aad ku raaxaysato sawirka.
178° xagal daawasho ballaadhan iyo 16.7M soo bandhig midab ayaa kaa caawinaya inaad si sax ah u rinjiyayso faahfaahin kasta oo ku saabsan farshaxankaaga.
1920*1080 xallinta muuqaalka muuqda iyo kala sareynta midabka dhabta ah iyo midabka muuqda ayaa ku siinaya adduun muuqda oo dhab ah
Awood leh oo waafaqsan
Labada daaqadaha iyo nidaamka android waa socon
ku habboon PS, AI, AE IWM. sawirida software si fiican
Faahfaahinta baakad qalinka qalinka dhijitaalka ah
Habka baakadaha caadiga ah: 2 pcs/kartoon
Cabbirka xirmada: 600*345*510mm
Xiga: QWB300-Z sabuurad cad is dhexgal
Hore: Qomo Interactive Flat Panel oo leh 4K xallin sare
QIT600F2 xogta farsamada
QIT600F2 Qorista kiniinka faahfaahin degdeg ah
Buugga isticmaale ee QOMO QIT600F2_1.1
QIT600 F2 Qorista Buug-yareedka Kiniinka